Kanye emva kwexesha kwi-Porn's Innocence | - Ithegi / Iinkwenkwezi Ze-Porn
Eyona Ithegi / Iinkwenkwezi Ze-Porn Ngesinye isihlandlo kwi-Porn's Innocence
Ngesinye isihlandlo kwi-Porn's Innocence
Amandla ka-Ed (Wikimedia)
Ngokufika kutshanje kwe Kushushu Amantombazana Ashushu , Ukulayishwa okulayishiwe kodwa ekugqibeleni kokuziphatha kwihlabathi leenkwenkwezi zevidiyo zesini sokuqala, u-Ed Powers oyinyani we-porn uye wabuyela kwi-lobes yam yangaphambili. Ingxoxo Oko kukhulile ngaphandle kwexwebhu likaRashida Jones kundikhumbuza ukuba kungakanani ukurekhodwa kwesondo kunye nokuba iintlobo zezilwanyana ziyisebenzisa njani itshintshile okoko umthandi wam oyena mntu wamanyani ndimthandayo wazisa umbono wabantu ababedubula.
Kwiminyaka elishumi elinesibhozo eyadlulayo, ndadibana noMnumzana Powers, 60, kwaye ebesoloko eyi lomntu. Ukuva ukuba ndingumlandeli wathumela ibhokisi yeekhasethi zeVHS ezinomsebenzi owamenza waziqhenya. Faka nayiphi na ihlaya oyithandayo, kodwa Amandla ' IiNdaba zokumisa iibhasi -Iminyaka engamashumi asibhozo eyandulela eyaziwayo Amatyala angcolileyo uthotho -yatshintsha ngonaphakade indlela endabona ngayo iphonografi, yayisisidlo.
Njengangoku ngoku nawuphina umntu onefowuni ehlawulisiweyo unokuxhoma ngokukhawuleza i-digital shingle kwaye abe kumzi mveliso we-porn, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba inkulu kangakanani kwaye ikhethekile-kodwa ingummangaliso wolwalamano-ii-camcorder zokuqala zazinjalo. Kwi IiNdaba zokumisa iibhasi , umlamli ongabonakaliyo nongqinelanayo yinkwenkwezi eyishiye kumthetho oyilwayo, ethetha abantu abangabaziyo kwizikhululo zokuhamba ezahlukeneyo zaseLos Angeles. Amandla ombane wekhamera enza abantu abangabaziyo abanomtsalane, ngokungathandabuzekiyo inqanaba lokusetwa kwelizwi laseNew York lokuzityhila. Kodwa yilensi yakhe esebenza njengomlukuhli, ephumelela ngokungathi akukho mntu ishishini kwizitrato zaseHollywood.
Kwisiqendu esinye esisephakathi kweshumi elinambini okanye amava escreen alo naluphi na uhlobo- bhanyabhanya, ojolise kwezemidlalo, nayiphi na into-engasoze iphume kwi-psyche yam, Amandla ka-Ed adibana ne-blonde eshushu, umfazi ololuhlobo anokulufumana kwi-glam rock ye-Sunset Strip. Kwaye ngelixa i-camcorder magnetism imzisa, ngokubonakalayo, kwindawo yendawo apho isondo laqala khona, nokuba kukhanya emini-itekhnoloji evusa uMarilyn Monroe wangaphakathi-ngu-M. Amandla amandla okucenga athabatha into ebambekayo kunye nebanter yoluntu kwindawo apho ndinokucinga khona ngesiphumo sokukrala. Oku, ngaphandle koluhlu lwamanqaku lukwisimo esigqibeleleyo kwisembozo sayo. Uyahlekisa, uzilungisa, unomdla ngendlela enzima ukuyilahlekisa. Ngelinye igama, ukukhupha izixhobo.
Ndiyindoda enobudenge, kodwa uhlobo olulungileyo lwe-maniac, auteur uyasiqinisekisa isifundo sakhe. Ukhuthaze isifundo sakhe ukuba alibale apho azimisele khona ukukhwela kwindawo yokuqala kwaye amjoyine kwigumbi lakhe kudliwanondlebe lwekhamera, emva koko alahle, emva koko enze izinto ezenziwa ngabantu abasempilweni ukuzikholisa bucala. Xa oko kutyhilwa kumxholo kwenzeka kwaye aMandla ekugqibeleni angena kwisakhelo, indoda encinci eneiglasi, uphawula umgca oya kuthi, kumashumi eminyaka, azise lula kwinkitha yabasetyhini ababanjiweyo kukhuphiswano lwekhamera ye-adventure: ndiyathemba ukuba awoyiki ipenises encinci encinci.
Wayengenguye nje uvulindlela wokwenene ye-gonzo / pro-am niche, isitalato iSharan, umhleli we Iindaba zeVidiyo yaBadala undixelele, kodwa ubonakala ngathi ungomnye wabantu abanemigaqo ngakumbi kwi-biz. Ndiyakholelwa ukuba uyawaphatha ngentombazana ngentlonipho kwaye akazange akhe axhaphaze abantu. Kwaye ubakhathalele ngokwenene abalandeli. Undixelele, ngokuqinisekileyo, ukuba ukuba intombazana igqiba ekubeni ayifuni indawo yayo (isebenza nabantu abaninzi bokuqala), uya kutshabalalisa iiDVD kwaye akhuphe indawo kwindawo yakhe.
Umnini we-M.O. njenge-camcorder uqobo, u-Ed Powers-hayi igama lakhe lokuzalwa-wangena kwi-porn ngenxa yezizathu zobukrelekrele. Wayengumntwana ehambisa iithokheni kwiivenkile zesini ezazikho, ndithembe, bantwana, bethakazela kwi-Times Square endala. Kwakungo-1984 xa aMandla abeka amehlo ku-Anthony Spinelli Reel Abantu . (Abantu beReel abakulo mfanekiso ushukumayo ngabantu bokwenyani. Bangabantu abakhululwe ngokwesondo abavumele abavelisi bale filimu ukuba baxoxe ngokukhululekileyo nabo ngemigangatho yezesondo, iinkolelo kunye nemigaqo yabo ... kwaye ukuba baziva ukuba ingxoxo kunye namandla abo enkanuko alungile. , baya kuba neentlobano zesini kunye neqabane elitsha okokuqala, kwaye bayakuvumela ukuba ifotwe. Khumbula, abantu bakwaReel osele uza kubabona asingabo abadlali, ngabantu bokwenyani!)
IiNdaba zokumisa iibhasi kwaye Reel Abantu ngoku zilityelwe kakhulu ngabaphulaphuli abangamanyala eziza kwaye zihambe njengayo nayiphi na imithombo yeendaba esetyenziswayo. Amandla e-Porn Pornstar show yindawo yokufumana incasa engangxengwanga yobuhle bobuvulindlela. Idlakadlaka kunye ne-retro kunye ehlekisayo , ngolwesiBini lwakutsha nje lubonisa indibaniselwano yamaqhula, iziphumo zesandi, ikhefu elingathandekiyo kunye nabantu abatsala umnxeba, kwaye - ngaphezulu kwako konke okunye - ingxoxo enzulu ngembali yesondo erekhodiweyo kunye nobuhle. Kwakukwinkqubo yeRadio ye-porn yeXXXXXX ukuba ndafunda malunga nomdlali ohambahambayo owayenguvulindlela UKim Christie . (Ngubani, ngokungalindelekanga ngokwaneleyo ngoku ophila njengendoda etshatileyo.) U-Ed usasazeke ngakumbi kunomfana endadibana naye ngo-1979. Izifundo zakhe zizele ngamagatya kwaye azisoloko zinezicengcelezo. Usaza kudibana noburharha, njengegcisa elinentswelo, molo nerdy, kwaye, njengasemva kwemini, i-mensch ebonakalayo.
Nditsalele umnumzana Powers kwangoko ehlotyeni ndaza ndabuza ukuba yintoni le imqhubele phambili ekubeni akhe phezu kwento uMnu Spinelli nabanye abathandana nayo abayishiyayo.
Kwakukho izinto ezazisenzeka ngokwenyani kodwa zazingazenzekeli njengokubona umntu ehleli ndaweni inyuka aye kuzichaza kubo, ucacisile. Kum, ayibhekiseli kwisini. Imalunga nokufumanisa-kunye-kunye nombukeli.
Amantombazana ashushu omzuzu wethu, ngelishwa, awanako nokuyicinga loo nto.
UDonnell Alexander ngumbhali wesimemo Usaziwayo waseGhetto: Ukukhangela uBawo wam kum .
Ithegi / Iinkwenkwezi Ze-Porn
Kwi 'Brand yethu Crisis,' Sandra Bullock amajelo James Carville
Ngaba uJohn Conyers Uyazi ukuba ngoobani ababulala irhafu kaChandra?
Intlungu yentsholongwane yeNtatheli malunga nee-imeyile zikaDonald Trump Jr. ngoku yiMilari yeHilarious
umsinga bukhoma wengxoxo ye-gop
uyithathaphi ioyile yecbd
ukhilimu ophawulwe ngamanqaku aphezulu
usolange noJay z ilifti bayalwa
Eyona ndlela ilungileyo yokuhluza amanzi endlini
umbuzo omnye wasimahla wokufunda ngengqondo